बलुचिस्तानका बाछिटा http://bit.ly/2ce6uvm
फास्ट ट्रयाकको गर्दभरागले कान पाकेपछि !
सुरुङमार्गको पनि लाइसेन्स दिने, फास्ट ट्रयाक पनि बनाउने ?
नेपाली राजनीतिमा अहिले अनावश्यकरुपमा फास्ट ट्र्याकको कुरा उछालिएको छ । यसले धेरै नागरिकको कान पाकिसकेको छ । यसबारे समर्थन र विरोधमा रहेका भनिएका नेताहरु र सामाजिक सञ्जालमा आएका मिथ्या तर्कहरूले सञ्चार वातावरण नै कलुषित बनाएको छ । आजको विषय यही गर्दभराग सुरतालमा आओस् भन्ने अभिप्रायले उठाइएको छ ।
लेखक फास्ट ट्र्याकको विरोधी
यो पंक्तिकार नेपालको राजनीति र मिडियामाथि आफ्नो कुनै प्रभाव छ भन्ने दाबी गर्दैन । तर, राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानी विचार सम्प्रेषण गर्न पनि छाड्दैन । यसै क्रममा लामो समयदेखि लेखकको दृढ विचार रही आएको छ, फास्ट ट्र्याकका नाममा अहिले जहाँबाट बाटो बनाउन खोजिएको छ, त्यो नै गलत छ ।
तराईबाट काठमाडौं आउने द्रुत मार्गलाई व्यापारिक प्रतिफलका आधारमा सर्वाधिक आकर्षक बनाई निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने हो भने त्यस सडकलाई अत्यधिक सवारी उपलब्ध हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले लाभ-हानीको मापदण्डमा लगानी गर्ने हो भने पनि यही शर्त लागू हुन्छ । यसका लागि यो स्थान नै गलत छ र परियोजनाको स्वरुप पनि गलत छ ।
पंक्तिकारको धेरै पहिलेदेखि जोड रही आएको छ, वीरगञ्ज-हेटौंडा-भीमफेदी-काठमाडौं रेल तथा सडक मार्ग एकै स्थानमा निर्माण गर्ने । यसले मेची-महाकालीको पूरै ट्राफिक हेटौंडामा भेला पारेर ल्याउन सक्छ । नारायणघाटको मानिस हेटौंडा हुँदै काठमाडौ आउँदा दूरी पनि मुङलिन हुँदै आउनुभन्दा केही कम पर्छ । यसका साथै समय बचत हुन्छ र जोखिम पनि कम हन्छ ।
स्थिति यस्तो स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ ध्यान नदिई फास्ट ट्रयाक पनि गर्ने र हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङ मार्गको पनि लाइसेन्स दिने बेतुकको काम भयो । यो नै दुवै परियोजनालाई तुहाएर काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको निर्माण अवरोध गर्ने खराब डिजाइनअन्तर्गत भएको हो ।
तर, पनि अहिले जे विवाद जसरी उत्पन्न भएका छन्, त्यसले लगानीको समग्र वातावरण नै बिग्रिने अवस्थाको चिन्ताले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी केही प्रश्नको विश्लेषण गर्न पंक्तिकार बाध्य भएको छ ।
द्रुत मार्ग समस्यामा किन पर्दैछ ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा दुईवटा नतिजामा पुगियो ।
पहिलो कारण, नेपाली पक्षले आफ्नो राष्ट्रको लाभ-हानीभन्दा पनि राजनीतिक लाभ-हानीको दृष्टिकोण अगाडि राखेर भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिक्रियात्मक राजनीति मात्र गर्नु ।
दोस्रो कारण, भारत स्वयं नै काठमाडौं र भारतीय सीमा क्षेत्र जोड्ने राजमार्गबारे रणनीतिक दृष्टिकोणमा विभाजित र धेरथोर कन्फ्युज्ड हुनु ।
पहिलो कारणका बारेमा खास लेख्नुपर्ने केही छैन, छर्लङ्गै छ । रणनीतिक भावभूमिदेखि निर्माण भएको भारतीय माइण्ड सेटको विश्लेषण आवश्यक छ ।
चीनमा माओत्से तुङको उदयपश्चात् तिब्बतको विलयपछि भारतमा अधिक सामरिक दबाब पर्न गयो । त्यसै समयको तनावमा युद्धसमेत भयो । युद्धसम्मको स्थितिमा आइपुग्दा चीनको विषयमा भारतमा एउटा ‘माइन्ड सेट’ स्थापित भयो कि चीन भारतका लागि विश्वास नै गर्न नसकिने ‘फियर फ्याक्टर’ हो ।
चीनसँग हच्किने र सोही अनुसार आफ्नो सामरिक रणनीतिहरु तय गर्ने अर्थात् ‘फियर वेस स्टा्रटेजी’ मा भारत रहेन । यो माइन्ड सेट नेहरु, शास्त्रीदेखि मोदी पहिलेका र इन्दिरा गान्धीपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरुमा समान देखिन्छ ।
यसको ठीक विपरीत माइन्ड सेट देखिन्छ इन्दिरा गान्धीमा । चीनको शक्तिशाली दबावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी मार्फत निस्तेज पार्ने अनि आक्रमणमा विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी किसिमले अगाडि बढ्ने । अर्थात् ‘फियर लेस स्ट्राटेजी’ लिने ।
इन्धिरा गान्धीपछि मोदी त्यो भावभूमिमा देखिएका छन् । अझ त्यसभन्दा अर्को नीतिमा एक कदम अगाडि मित्रताको दबावको रणनीति ।
भारतमा स्थापित यी दुईवटा दृष्टिकोणले नेपालका राजनीतिक र आर्थिक मात्र हैन, विकाससम्बन्धी परियोजना पनि प्रभावित हुने गर्छन्, जुन असर अहिले फास्ट ट्र्याक राजनीतिमा समेत देखिएको छ ।
फियर वेस स्ट्राटेजी अन्तर्गत भारत जहिले पनि हिमालय पर्वत र माहाभारत पर्वतमालाहरुलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको प्राकृतिक बार-किल्ला ठान्छ । यो क्षेत्र सामरिकरुपले भरसक प्रयोग नै नहुने किसिमको होस् भन्ने चिताउँछ ।
यही रणनीतिअन्तर्गत नेपाल-चीन सडक साना र अप्ठेरा मात्र बनून् भन्नेतर्फ भारतको चाहना हुन्छ । काठमाडौं र तराईतर्फको सम्पर्क पनि अप्ठेरा सडकहरुले मात्र जोडियोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । जसले गर्दा चीनसँग युद्धकै स्थिति आइपरे उसले त्यो क्षेत्रलाई सहजताका साथ प्रयोगमा ल्याउन नसकोस् ।
नेपाललाई रणनीतिक भूगोलमा विभाजन गर्ने हो भने पहाड र हिमाललाई आफ्नो पकड बाहिरको क्षेत्र ठानी चीनले नै उपयोग गरोस् भनी छाडिदिएको आभास हुन्छ । यही नीति अन्तर्गत फास्ट ट्रयाकको विरोधी र समर्थक दुवैलाई एकै स्थानबाट निर्देशित गरिएको छ भन्न सकिन्छ ।
यही कारणले द्रुतमार्गमा आवश्यक ध्रुवीकरण गराई परियोजना नै तुहाउने काम भइरहेछ । वीरगञ्ज-हेटौंडा-भीमफेदी-काठमाडौं मार्गलाई निजगढ-काठमाडौंले तुहाउने, निजगढ-काठमाडौंलाई यस्तो विवादले सक्ने । कुरा प्रष्ट छ, उत्तर-दक्षिण द्रुत मार्ग बन्न दिनुहुन्न ।
अर्कातर्फ मोदीको फियर लेस स्ट्राटेजीले चीनलाई चुनौती र मित्रता दुवैलाई अंगीकार गरेको छ । जस अन्तर्गत नेपालमा उत्तर-दक्षिण ठूला सडकहरु निर्माण भए आवश्यकता अनुसार भारतलाई ती सडकको सामरिक उपयोग गर्न सहज हुन्छ र भारतका लागि सामरिक महत्वको हिसाबले राम्रो हुनेछ ।
यी दुई भावभूमिका लडाइँमा पहिलो भावभूमिले अहिले जितेको छ । यसर्थ त्यो मार्ग भाँड्नका लागि फास्ट ट्र्याकका समर्थक र विरोधी दुवैलाई सफलताका साथ उपयोग गरिँदैछ ।
फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनुपर्छ वा दिनु हुन्न भन्ने विवाद नै गलत
फास्ट ट्रयाक परियोजना नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरी ग्लोबल टेण्डरको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा उचित प्रस्ताव दिने कम्पनी आइ.एल.एफ.एस.कन्सट्रक्सनलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
उक्त कम्पनी भारतमा दर्ता भएको विदेशी लगानी पनि रहेको प्राइभेट कम्पनी हो । मुख्य लगानीकर्ताको सूचीमा भारतका केही बैंकसहित अवुधावीस्थित एउटा कम्पनी पनि रहेको देखिन्छ । अर्थात् यो कम्पनी भारतमा रहेका हजारौं निजी कम्पनीहरु जस्तै एउटा कम्पनी हो, जसमा भारतको प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार कसैको कुनै स्तरमा पनि संलग्नता देखिन्न ।
यस्तो स्थिति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि एकातर्फबाट भारतलाई दिनुपर्छ भनिने र अर्कातर्फ भारतलाई दिनै हुन्न भन्ने विवाद सुरु भएको छ । यो अनावश्यक कृत्रिम विवादलाई सतहमा ल्याएर भारतसँगको बिगि्ररहेको सम्बन्धलाई नियोजित किसिमले अझ बिगार्न दुवै खेमा लागेका छन् ।
यो कस्तो राष्ट्रवाद ?
भारतको एउटा भावभूमिको आधारमा हिमालय क्षेत्र र महाभारत क्षेत्र दुवैलाई भरिशक्य अप्ठेरो बनाई भौगोलिक बेरियरको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने छ । त्यसै अनुसार फास्ट ट्र्याक नेपालले आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क आएको छ । नेपालका वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता कसैबाट छिपेको छैन । यो परियोजना नेपालले बनाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ अप्रत्यक्ष रुपमा नबनाउने वा कान्ति राजपथ जस्तै बहुदशकीय योजना बनाउने भनिएको हो ।
भारतलाई रणनीतिक कारणले काठमाडौंसम्म तराई जोड्न द्रुत मार्ग चाहिन्छ भन्ने अर्को भावभूमिबाट विश्लेषण गर्दा भारतको रणनीतिक चाखलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आफैंले सडक बनाउने भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात् आफ्नो विकास अवरुद्ध गरेर भारतको एक पक्षको रणनीतिक सोचको पृष्ठपोषण गर्ने वा आफ्नो पैसा खर्च गरेर अर्को सोचलाई अनुमोदन गर्ने भारतपरस्त राष्ट्रवाद नै भारतको देखावटी विरोध वा बनावटी समर्थनमा सतहमा आएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नो सापेक्षित लाभ हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले अहिलेको फास्ट ट्रयाक परियोजना खारेज गरी वीरगञ्ज-हेटौंडा-काठमाडौं रेलवे र द्रुतमार्ग परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ
उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बारम्बार यो परियोजना भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने समाचारहरु प्रशस्त आएका छन् । प्रधामन्त्री र अरु केही उपल्लो तहका नेताहरुले पनि भारतलाई नदिने, दिनु हुन्न भनेका कुरा सार्वननिक भएका छन् । भारतले त्यो मार्ग निर्माणका लागि भनेको वा पत्राचार गरेको उहाँहरुसँग त्यस्तो प्रमाण छ त ? पक्कै नहोला । तर पनि दुवै पक्षले भारतीय पक्षलाई अनावश्यक रुपले तानिरहेछन् । कूटनीतिक रुपले यस्तो अशोभनीय काम नबुझीकन पक्कै भएको छैन ।
नेपालले आफ्नो सापेक्षित लाभ हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले अहिलेको फास्ट ट्रयाक परियोजना खारेज गरी वीरगंज-हेटौंडा-काठमाण्डौ रेलवे र द्रुतमार्ग परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा भारतको रणनीतिक चाख (मोदीको) स्वाभाविक आकषिर्त हुन्छ ।
यो परियोजना जो कसैको पैसाले बनाए पनि भारतको मोदी पक्षीय रणनीतिक चाख सम्बोधन हुनु नै छ भने उसको वित्तीय संलग्नता किन नगराउने ? हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ त वास्तविकताबाट भागेर क्षणिक तुष्टिका लागि राष्ट्रको विकास अवरुद्ध गर्नु बुद्धिमानी होइन । अर्थात् भारतको समेत वित्तीय संलग्नतामा वीरगञ्ज-हेटौडा-काठमाडौं रेल तथा द्रुतमार्गको जुम्ल्याहा परियोजना अविलम्ब सुरु हुनुपर्छ ।
न्यूनतम आयको प्रत्याभूतिको प्रश्न
अहिले रेखांकन गरिएको द्रुतमार्गको ठेक्का दिने भनिएको कम्पनी आइ.एल.एफ.एस.ले उक्त परियोजनाको लागि न्यूनतम आयको प्रत्याभूति राज्यबाट खोजेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो पंक्तिकार यस कुरालाई स्वाभाविक मान्छ । यत्रो परियोजना आँट्ने कम्पनीले नेपालको अतीत र वर्तमानलाई नबुझ्ने कुरै आउँदैन ।
राज्यलाई सबैतर्फबाट लाभ हुने वीरगञ्ज-हेटौंडा-भिमफेदी-काठमाडौं मार्गलाई छाडेर यो मार्गमा नीति-निर्माण तह किन लाग्यो भन्ने कुराको गहिरो रहस्य उक्त कम्पनीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । जब आ-आफ्नो स्वार्थ वा पराई अह्रोटबाट राष्ट्रका लागि यहाँसम्मको घात गर्ने निर्णय नीतिगत तहमा हुन सक्छ भने त्यत्रो दायित्व बोकेर उक्त मार्ग बनाएको भोलिपल्ट उसलाई टाट उल्टाउने खेल नेपालको नीतिनिर्माण तहबाट हुन्न भन्ने कुराको प्रत्याभूति के ?
उक्त मार्ग बनाए पश्चात् हेटौंडा-भीमफेदी-काठमाडौं दु्रत मार्ग र रेल बन्यो भने त्यो मार्गबाट कति गाडी हिँड्लान् ? कति टोल प्राप्त होला ? अझ पूर्वका सवारी साधनलाई पनि सिन्धुलीदेखि फुर्कोट सुरुङ बनाई त्यसबाटै काठमाडौं छिराइन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के ? एउटा व्यापारी कम्पनीले यो परियोजनाको बदलामा अरु परियोजनाहरु नबनाऊ भन्न मिल्दैन । यसर्थ न्यूनतम आयको प्रत्याभूति जो कोहीले खोज्छ ।
सबैजनाले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीलाई यहाँ आएर नाफा नकमाऊ भन्नुको अर्थ लगानी विकर्षण गर्नु हो । यो ट्रयाक कम्पनीको भन्दा नेपालको ठूलो आवश्यकता हो, त्यसपछि एक किसिमले भारतको रणनीतिक आवश्यकता हो । कम्पनीको चाख मुनाफा मात्र हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ ।
अहिलेको कम्पनीलाई नदिई नेपालीहरु मात्रले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनीलाई दिए पनि यो शर्त राख्नैपर्ने हुन्छ । नत्र राष्ट्रलाई बाटो बनाइदिने, राष्ट्रकै नीतिले आफू डुबेर जेल जानुपर्ने काम मात्र हुनेछ, यो तीतो सत्य हो । यस्तो कुराले अहिलेको मीठो पहेलीमा रमाउनेहरुलाई झोंक चल्न सक्छ ।
बढी लागत निर्धारणको प्रश्न
कुनै पनि सडक निमार्ण गर्दा उपयोग हुने सामाग्रीहरु, मेसिन औजार र सेवा सबै मूल्य थाहा नहुने प्रकारका प्याटेन्टेट केही पनि हुँदैनन् । जोसुकैलाई थाहा हुने कुरा हो, माटो काटेको कति पर्छ, ब्लास्टिङ गरेको कति पर्छ, अलकत्रा कति ? कङक्रिटिङ कति अनि फलाम कति ? यसबाट के मा कसरी बढी मूल्य कायम भयो सहजै भन्न सकिन्छ । यसमा त्यस्तो रहस्यमय केही हुँदैन ।
दोस्रो प्रश्न हो, यसमाथिको कर्जा लगानी । प्रक्षेपित ट्राफिकका आधारमा टोल आय जति हुन्छ त्यो कुनै कारणले अपुग भएमा मात्र राज्यले थपिदिने हो । यसकारण त्यो प्रक्षेपित आयका आधारमा वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक भए मात्र कर्जा प्रदायक संस्थाले लगानी गर्छन् । परियोजनाका वित्तीय सूचक नै नकारात्मक हुने गरी परियोजनाको लागत वृद्धि सम्भव छैन ।
यो कुरामा किन पनि जोड दिन जरुरी छ भने यो प्रकरण नेपालका बुट प्रणालीमा बन्ने समग्र परियोजनालाई प्रभावित पार्ने किसिमले आइरहेछ । बुढी र कालको कथा झै भइरहेछ । यही प्रकृतिको समाचार र लेख केही जलद्युिुत् परियोजनालाई नै तोकेर केही समयअघि आइसकेका छन् । यस्तो कुरा बोल्न र लेख्नुअघि सम्बन्धित सबैले सोचौं ।
नबुझेरै नेपालको विकासमा भित्रेको पुँजीलाई हामीले निरुत्साहित त गरिरहेका छैनौं ? यसका बाबजुद पनि कहीँको पृष्ठपोषणमा देशको विकास भाँड्न लागिपर्नेहरुलाई केही भन्नु छैन । जनताले एक न एक दिन अरुण-३ प्रकरणमा झै बुझिहाल्छन् ।
के नेपालमा आउने सबै कम्पनी गलत हुन् ?
यो पंक्तिकार कालीगण्डकी एको ठेक्का प्रकरणपछिका ठूला ठेक्का परियोजनामा आएका बहुसंख्यक कम्पनीहरुको नेपालमा निर्माण भएको छविबारे जानकार छ । तीमध्ये प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएकै कम्पनी हुन् । तर, ती सबैले नेपालमा बदनामी खुबै कमाएका छन् । कालीगण्डकी एको ठेकेदार इम्प्रिजिलोले लगभग डेढ दशक मुद्दा लडेर पैसा लिनुपर्‍यो । जापानी कम्पनी हाजमाको अनुभव पनि सकारात्मक छैन ।
चिनियाँ कम्पनीहरू रेल्वे, गेजुवा, सिनो हाइड्रो, हाइड्रो चाइना सबै बदनाम नै छन् । भारतीय कम्पनीहरु राइट्स, भेलदेखि एञ्जेलिक, कल्पतरु, अरिभा कसैको पनि अनुभव राम्रो छैन । अहिले यो सूचीमा मेलम्चीको ठेकेदार र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेकेदार सानजोसे पनि थपिएका छन् ।
यस्ता विश्वप्रशिद्ध कम्पनी नेपालमा मात्र किन खराब प्रतीत भइरहेछन् ? हाम्रो प्रणालीको खराबीको संगतले यस्तो भएको हो कि हैन ? विचारणीय छ । यही प्रकरणमा बदनामीको टीका लगाइरहेका अरु कम्पनी थपिएका छन्, जसमा आइ. एल. एफ. एस. पनि परिरहेको छ ।
यो गर्धभराग सुरतालमा आओस् । नेपाली जनतामा चेतना होस् । विकास विरोधी माफियाको चंगुलबाट नीति निर्माण तह फुत्किन सफल होस् ।
२०७३ भदौ २६ गते १७:०५ मा प्रकाशित
Posted by arun subedi at 8:29 AM No comments:
नयाँ माल, पुरानै चाल http://bit.ly/28IvWqY
Posted by arun subedi at 8:24 AM No comments:
बहसः माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउन सकिन्छ भने जीएमआरलाई दिन जरुरी छैन
ठूला विकास आयोजनाबारे बहस
गत हप्ता अनलाइनखबरमा प्रकाशित माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी दुई आलेखहरुले एउटा बहसको अध्याय सुरु गरेको छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण र ठूला परियोजनाहरुमा एक/दुईवटा लेखहरुमा नै सबै पक्षबारे चर्चा गर्न सम्भव हुँदैन । यसकारण कतिपय पाठक र जिज्ञासुका जिज्ञासा अनुसारका तथ्यहरु र तर्कहरु यथेष्ट मात्रामा नपरेका पनि हुन सक्छन् । तर, नियोजित आग्रहअनुसार गलत तथ्य सूचना र अभद्र टीकाटिप्पणीहरुमा रम्ने रमाउनेहरुप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन ।
यसै पनि क्षुब्ध क्रोधितहरु भ्रमित हुन्छन् । क्रोध र आग्रहको पर्दा उठ्नासाथ उनीहरु सही मार्गमा आउँछन् । यसकारण त्यस्ता टिप्पणीहरु उपर समय खर्च गर्नु वाञ्छनीय ठहराइएन ।
उपल्लो कर्णालीको पीडीएका धेरै दफाहरुबारे केही जिज्ञासु मित्रहरुले विभिन्न माध्यमबाट जिज्ञासा पनि प्रकट गर्नुभयो । त्यसबखत लागेको थियो, त्यही पीडीएको चिरफारतर्फ केन्द्रित हुन् । तर, तीन अंकमा यथासक्य सवै विषय समेट्ने पहिले नै निर्धारित थियो । यस कारण यस अंकमा त्यस्ता ठूला परियोजनामा नेपालको आन्तरिक लगानी मात्र परिचालन गरेर बनाउन सम्भव छ कि छैन भनी विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छः
मेरा लेखहरुको प्रतिक्रियामा नेपालले नै ९०० मे.वा.मात्र हैन, ४१८० नै मे.वा. को उच्चबाँध बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरु आए । यी सबै कुराहरु आइरहँदा सबैले मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय हो- नेपालका प्रचलित नीति विधि र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था ।
उपल्लो कर्णाली मात्र हैन, सके सबै परियोजना आफैं बनाए राम्रो । सानातिना त के, २००/३०० मेगावाट सम्मका परियोजना उचित नीति र विधि भए नेपाली निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ ।
अझ यो लेखकले त ४०० अर्वको काठमाण्डौ मेट्रो रेल पनि आफ्नै श्रोत परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ, राज्यले उचित नीति र विधि दिए पुग्छ भन्दै आएको छ । लेखकले ९ वर्ष अगाडि आफ्नो पुस्तक ‘सपनाका गाथाहरु’मा काठमाण्डौमा मेट्रो रेल यसरी सम्भव छ भनी लेख्दा, बोल्दा धेरैले लेखकलाई पागलझै ठानेका थिए । अझ यो आन्तरिक स्रोतबाटै सम्भव छ भन्दा त हाँसोको पात्र नै भइएको थियो । तर, आजको मितिमा यो विषय आम बहसमा आएको छ ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालको पक्षबाट हेर्दा निजी र कर्पोरेट क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत उत्पादन खुला गरिएको छ र त्यसमा विदेशी लगानीलाई आह्वान गरिरहेको अवस्थामा भएका पीडीएका सर्तहरुमध्ये यो नै सबैभन्दा लाभकारी छ भन्ने अभिप्रायः हो लेखकको ।
यसै पनि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक नकारात्मकताले पुँजी आउनुको सट्टा पलायन भैरहेको नेपालको अवस्था हो । त्यहीमाथि तामाकोशी-३ बाट नर्वेजियन हट्नु र तल्लो अरुणमा ब्रासले सर्त पूरा नगरेका कारण रद्द हुनु जस्ता धेरै घटनाले नेपाल लगानीका लागि अयोग्य राष्ट्रका रुपमा चित्रित भैरहेको अवस्था छ ।
अझ यी परियोजनामाथि भएको सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारले यस्ता परियोजनाहरु पनि परित्यक्त भए भने विदेशी लगानीका लागि नेपाल अयोग्यतम राष्ट्रका रुपमा प्रमाणित हुनेछ । चिन्ताको विषय यो पनि हो ।
लगानी गर्नु गराउनु र कर्जा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु सजिलो विषय होइन । सञ्जालका बतासे भावनाले न लगानी आउँछ /हुन्छ, न त कर्जा नै व्यवस्थापन हुन सक्छ । यो कटु यथार्थ आम नेपालीले बझ्नुपर्छ ।
अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
कुनै जमानामा अरुण-३ का विरुद्धमा योभन्दा सानो अभियान थिएन । सबैले सोचौं, त्यसबाट हामीले कत्रो अवसरात्मक लाभ गुमायौं । लेखक स्वयम अरुण-३ परियोजनाको पक्षमा उभिँदा पाएको भुक्तमान अहिले पनि ताजै छ ।
त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नै विरुद्धमा खनिएपछि अरुण-३ तुहियो । यदि त्यो बनेको भए आज काठमाण्डौ र अरुण-३ क्षेत्र कम्तिमा २२० के.भी.को प्रसारण लाइनले जोडिएको हुन्थ्यो । प्रथमतः त्यो अवस्थामा लोडसेडिङ नै हुँदैन्थ्यो । औधोगिक विकास र अन्य उपयोगले भैहाले पनि आजजस्तै भारतलेे दिन्छु भनेको विद्युत ल्याएर समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले दक्षिणसित काठमाण्डौ ६६ के.भी.को डबल सर्किटले मात्र जोडिएको छ । अनि भारतले दिए वा आफ्नै उत्पादन भए पनि आवश्यक परिणाममा विद्युत ल्याउनै सकिन्न । यी सबै अरुण-३ परियोजना तुहिनुका परिणति हुन् ।
तात्कालीन भूमिकाका लागि एमाले नेताहरुले गल्ती स्वीकार गरिसक्दा पनि त्यसका केही खलनायकहरुले आजसम्म आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
यस्ता परियोजनाहरु आन्तरिक श्रोतवाट सम्भव छन् कि छैनन् भनी विश्लेषण गर्न लेखकको एउटा अनुभव निकै सहायक होला पाठक वृन्दलाई-
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चीन भ्रमण तय भैसकेको थियो । चीनका बारेमा धेरथोर चासो राख्ने र धेरथोर विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अनि लगानीका मोडेलहरुको केही जानकारी र आइडिया भएको व्यक्तिका रुपमा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईसँग त्यसै सन्र्दभमा भेटघाट भयो ।
चौलागाई दोलखाको भएकाले वहाँको चाख बैरङ्ग योजना तामाकोशी ३ माथि पर्नु स्वाभाविक थियो । हाम्रो वार्ता त्यसैको वित्तीय मोडलमा केन्दि्रत थियो । यस परियोजनामा प्रर्वद्धक पुँजीभन्दा कर्जा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र जटिल विषय थियो । कर्जा इक्विटी अनुपात ८०ः२० गर्दा पनि लगभग १११ अर्बको उक्त परियोजनालाई ८० अर्बको हाराहारीमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । प्रतिनिधि परियोजनाकारुपमा यसलाई अगाडि बढाएर अरु योजना पनि त्यसै मोडेलमा बढाउन सकिने कुरा वहालाई बताएको थिएँ ।
अलिकति नीति र विधि परिमार्जन गर्नासाथ इक्विटी समस्याको विषय थिएन । सरकारले यसै पनि अहिले प्रतिमगावाट ५० लाख मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिने नीति लिएकै थियो । सोही नीतिलाई केही बदलेर त्यस परियोजनाबाट आउने मूल्यअभिवृद्धि कर र अगि्रम आय कर इक्विटीमा परिणत गर्ने हो भने ७-८ अर्ब इक्विटी स्वतः निर्माण हुने थियो ।
यसमा ४९ प्रतिसत सर्वसाधारणबाट उठाउन पाइहालिन्थ्यो । बाँकी ५/७ अर्ब इपीसी ठेक्का सम्झौता भएको ठेकेदारले नै छाडनुपर्ने सर्त राखेर ठेक्का सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि कुनै कहीँ कतैको लगानी आवश्यक नै भएन ।
ठेकेदारको विकल्पमा नेपालकै उद्यमी व्यापारी समूह पनि केही लगानीका साथ आउन सक्षम थियो नै । यसर्थ उक्त परयोजनालाई कर्जा व्यवस्थापनको कुरा महत्वपूर्ण भएकाले चीनमा त्यसतर्फ ध्यान दिए अति उत्तम हुने कुरा मैले एमाले नेतालाई बताएको थिएँ र एउटा सानो लिखित प्रस्ताव पनि दिएको थिएँ । ८० अर्बको हाराहारीको कर्जा नेपालका सबै वित्तिय संस्थाहरु मिलेर एकल पाटीलाई दिन सक्ने अधिकतम कर्जा सीमासम्मको कर्जा उपलव्ध गराउँदा पनि प्रायः असम्भव परिमाण हो यो ।
यसरी सबै वित्तीय संस्थाको ठूलो परिमाणको कर्जा एउटै ठाउँमा लगानी भयो भने अन्य कर्जाको उपभोगमा ठूलो असर पर्न गई बजार नै गडबडाउन पुग्छ । यसर्थ बाहिरबाट नै कर्जा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले दुईवटा नीति र विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो । यस्ता परियोजनाको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने हुँदा यिनीहरुले लिने अन्तराष्ट्रिय कर्जामा राज्यले जमानी बस्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
अर्काेतर्फ परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिएर नेपाली मुद्राको आयबाट तिर्न लाइ मुद्रा विनिमय नीतिमा भारतीय रुपैयाँको अचरतालाई कायम राखेर अलग फोटो भएको भारुको प्ा्रतिछायाँ मुद्रा नबनाई अमेरीकी डलर र भारुको दोहोरो क्याम्पिङमा गएर नेपाली मुद्राको ओज बढाउने नीति लिनुपर्छ भनी मैले सुझाएको थिएँ ।
यस्तो नीतिले डलरमै पीपीए गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खिम्ती र भोटेकोशीलेझै डुबाउन्नथ्यो । साथै नेरुको पीपीएबाट पनि डलरको कर्जा तिर्न सकिन्थ्यो । तर, यी दुबै कुरा सजिला थिएनन् । यसमा विश्व बंैकलगायत पश्चिमाहरुको ठूलो दबाव झेल्नुपर्ने थियो । संविधानका अन्तरवस्तुमा त आफ्नो डिक्टेसन लागु गर्न सक्षम यो शक्तिलाई कम आँक्न सकिन्नथ्यो ।
यस्तो नीति लिएर चीन र भारतका इक्जिम बंैकहरु, भर्खरमात्र खडा भएको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक आदि सबैसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन र आजसम्म पनि भएको छैन । यदि यस्ता नीतिहरु अवलम्वन गरी अगाडि बढ्दा यूरोपको निजी र कर्पोरेट क्षेत्रबाट पनि कर्जाको व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो ।
अझै समय बितेको छैन, यस्ता नीति र विधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी भिक्षामाथिको निर्भरता हटाउँछ । स्वाभिमान यसरी निर्माण हुन सक्छ समृद्धिसँगै ।
केचाँहि पक्का छ भने त्यस्ता परियोजनाहरु ठूल्ठुला कम्पनी निर्माण गरेर मात्र गर्नु पर्छ । यसको कारण चिलिमे र चमेलियालाई बुझे थाहा भइहाल्छ । यी नीतिहरु लिन सकेमा चार सय अर्बको परियोजना त सकिन्छ भने ९०० मेगावाटको किन नसक्नु ? तर कर्जा दिनेले सरकारलाई पत्याइदिनुपर्‍यो ।
पुँजी बजार र ठूला परियोजना
नेपालमा पुँजी बजारबाट पुँजी उठाउने क्रम र पुँजी बजारमार्फत लगानी गर्ने जनचेतनाको विकास उत्साहप्रद किसिमले अगाडि बढेको छ । तर, यसको अर्थ कुनै पनि परियोजनाको सतप्रतिशत लगानी शेयर रकमबााट मात्र हुँदैन । शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश र त्यसका सम्भावित पुँजी लाभको गणित अवश्य हेर्नुपर्छ र हेर्छ ।
कालान्तरमा २० प्रतिशत इक्यिुटी सतप्रतिसत परियोजनाको मालिक र शत प्रतिसत आयको हकदार हुने अवस्थामा लगानी जसरी जुट्ला, त्यसरी नै पूर्ण लागत नै शेयरबाट मात्र उठाउने भनेपछि लाभांश र पुँजीगत लाभ अत्यन्त डाइलुटेड हुन्छ । पुँजी बजार त्यस्ता परियोजनामा उत्सुक हुनै सक्दैन ।
कुनै पनि कम्पनीको शेयर आह्वान गर्दा जम्मा भएको पुँजीलाई मात्र गणित गरेर त्यो सबै लगानीका लागि हरदम तयार पुँजी हो भन्ने मान्न सकिन्न । त्यो पुँजीमा ठूलो परिमाण सहकारी, बैंक र वित्तीयसंस्थाहरुको कर्जामार्फत परिचालन भएको हुन्छ । यो पक्ष पनि बुझ्न जरुरी छ । यी सबै पक्षका बावजुद पनि शेयरप्रतिको जनचासो उर्जा क्षेत्रमा मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्र र अन्य पूर्वाधार एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक कुरा हो ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ, माल्दिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यसैका आधारमा केही ९००/१००० मे.वा.का परियोजनाहरु बनाउन इक्विटीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, कर्णालीमा ४१८० मे.वा.अहिले हाम्रो बलबुँताको कुरा होइन । असम्भव र अप्रमाणित सपनाका आधारमा वर्तमानमा सम्भव परियोजनाको अवसरात्मक लाभबाट वञ्चित हुनु बद्धिमानी होइन ।
यो पनि हुन सक्छ, पर्दा पछाडिको उद्देश्य
भारतेली कम्पनी जीएमआर प्रर्वद्धित कम्पनीसँग भएको पीडीएका सर्तहरु विश्लेषण गर्दा र परियोजनाको लागत एवं लाभको गणित गर्दा जीएमआरले उसको पक्षमा खास राम्रो डिल गर्‍यो भनेर संसारका व्यापार तथा लगानी क्षेत्रका खलिफाले सायदै भन्छन् होला । निकै लामो समयदेखि यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो पनि देखिँदैन ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ । मालदिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यी सबैलाई विश्लेषण गर्दा कतै जीएमआर कतै बिप्पा अन्र्तगत राम्रो दाबी ठोकेर आफूलाई परियोजनाबाट बाहिर्‍याउने दाउमा त छैन ? यसप्रति पनि लेखकको गम्भीर आशंका छ ।
यसको पूर्वाधारस्वरुप कर्णाली परियोजनाको विरोध पनि प्रायोजित त छैन ? शंका गर्ने धेरै कोणहरु हुन सक्छन् ।
केही जापानी र केही चिनियाँ कम्पनीहरुसँग यहाँका निकै राम्रा ठहरिएका परियोजनामा आउनका लागि लेखक स्वयमंले धेरैपटक वार्ता गरेको छ । धेरै कम्पनीले बुट प्रथा नै ठीक होइन । हामी लगानी गर्ने, कर्जा लिने, अनि सरकारलाई किन जिम्मा दिने ? भूगोल सरकारको हो भन्दैमा जमीनमा पनि निश्चित समयपछि छाड्नुपर्ने शर्त राखे भइहाल्यो नि किसानलाई ।
नाभिकीय वा तापीय उर्जा कम्पनीचाँहि आफ्नै हुने, जलविद्युत चाहिँ किन नहुने ? जापानीको यस्तो कुरा सुनेर लेखक एक समय हतप्रभ भएको थियो । सरकारको नीति र कानून यस्तै छ भन्ने उत्तरको प्रत्युत्तरमा उसले भन्यो-उसोभए सरकारले नै लगानी गरोस् ।
एकापट्टि लगानी ल्याउनलाई यस्तो अवस्था भोग्नपर्छ, अर्कापट्ट िलगानीकर्तामाथिको सामाजिक नकारात्मकता र राज्यको उदासीनता खपिनसक्नुको छ । यसकारण कुनै परियोजनामाथि विरोध गर्नेले यी सबै पक्षको हेक्का राखुन् भन्ने मेरो अभिप्राय हो ।
माथिल्लो कर्णालीबारे सुवेदीका थप लेखहरु यहाँ पढ्नुहोस्
माथिल्लो कर्णालीः पश्चिमाले भाँड्दैछन् कि भारतले आफैं ?
माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु ‘पपुलिष्ट राष्ट्रघात’
२०७३ असार १९ गते १८:०० मा प्रकाशित
Posted by arun subedi at 8:19 AM No comments:
बहसः माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु ‘पपुलिष्ट राष्ट्रघात’
नेपाललाई फाइदा हुने योभन्दा राम्रो सम्झौता गरेर देखाउन्
प्रकृतिको सृष्टिको पहिलो गुण हो हरेक प्राणीले आफ्नो भलो हेर्छ । तर मानिसले चाँहि अर्को मानिस मात्र हैन, समाज, सभ्यता र यस अन्तर्गत निर्माण भएका संस्थाहरुका साथै अरु प्राणी, वनस्पति चराचर जगत सबैको भलो सोच्दछ ।
यो गुण जब मानिसमा आउँछ, ऊ दैवी वृत्तिले युक्त कहलाउँछ । जब मानिस आफ्नो फाइदाका लागि अरु मानिस र जगतको जस्तोसुकै हानी पनि पुरयाउन तयार हुन्छ, त्यसलाई पूर्वीय शास्त्रले आसुरी वृत्ति भनेको छ ।
तर, आफूलाई पनि कुनै लाभ नहुने सभ्यता अर्थात राष्ट, समाज, छिमेकी सबैलाई हानी नै हानी हुने काम जब मानिस (हरु) ले गर्दछन्, त्यसलाई के भन्ने ? शास्त्र खासै बोलेको छैन । जब त्यस्ता वृत्तिप्रति ठूलो जमात लाग्न थाल्दछ, त्यसलाई आम पागलपन (मास म्यानिया) भन्नुबाहेक केही विकल्प रहन्न ।
नेपालको विकास क्रमको इतिहास लगभग यही आम पागलपनको शिकार भएको फेहरिस्त हो र त्यो पागलपनको आधार हुँदै आएको छ, जसलाई कथित राष्ट्रवाद भन्न सकिन्छ । यस क्रमको पछिल्लो शिकार भएको छ उपल्लो कर्णाली परियोजना ।
अहिले कर्णाली परियोजनाको विरोधमा कर्णाली वचाउ अभियान सामाजिक सञ्जालहरुमा झण्डै भाइरल नै भएको अवस्था छ । कहीँ कतै समाचार पनि आइसकेका छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञाापन समेत दिइएको छ ।
केही समय अगाडि कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारहरु जलाएर आफूलाई राष्ट्रवादी घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि विकास निर्माणतर्फ एकल सोच नभएका केही राजनीतिक शक्तिहरु त्यस्तै उपद्रो गर्न तम्सिई बसेकै छन् ।
नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जहाँ राष्ट्रवादी बन्न राष्ट्रको शुभचिन्तन लिनै पर्दैन, छिमेकीप्रति घृणा ओक्लने र यस्ता आयोजनालाई दुःख दिने तथा दुश्प्रचार गर्ने काम गरे पुग्छ । यसै क्रममा उपल्लो कर्णालीलाई लिएर अहिले राष्ट्रवादको बजारमा विज्ञापित केही प्रश्नहरु उपर विश्लेषणत्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्य रहेको छ यस लेखको ।
पहिलो प्रश्नः उपल्लो कर्णालीमा राष्ट्रलाई कति फाइदा वा घाटा छ ?
नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरको लगानी रहने उक्त परियोजनाका लागि भएको प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए)का सर्त हरुलाई आधारमान्दा नेपाल सरकारलाई उक्त कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको १२ प्रतिशत विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने उक्त परियोजनाको मिल्कियत राख्ने कम्पनीमा विना लगानी सरकारको २७ प्रतिशत इक्विटी शेयर कायम हुनेछ ।
२७ प्रतिशत शेयर रहने साझेदार अर्थात सरकारको जमानत -सोभेरियन ग्यारेन्टीविनानै जीयमआरले उक्त परियोजनालाई कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अरु परियोजनाहरुमै यो पनि बुट अवधि सकिनासाथ स्वतः सरकारको हुनेछ ।
पीडीएमा भएको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसबाट उत्पादित विद्युत नेपालले पाउने हिस्साबाहेक सबै उसैले बजार व्यवस्थापन गरी भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने छ । यसको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कुनै वाध्यता छ्रैन । यो पनि अति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
यी तीन महत्वपूर्ण पक्षहरुमध्ये अरुण-३ मा इक्वीटी शेयर मुफतमा पाउने बुँदा छैन भने मुफतमा विद्युत लगभग २२ प्रतिसत मिल्छ । तर, पश्चिम सेतीको प्रारम्भिक सम्मौता (चीनको थ्री ग्रजेजको उपक्रमसँग भएको ) मा यी कुनै सुविधा उल्लेख छैनन् । त्यसको सम्पूर्ण उत्पादन विद्युत प्राधिकरण अनिवार्य किन्नै पर्ने र लगानी गरे जति मात्र शेयर प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
माथिका तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा गणितीय फाइदा बेफाइदा स्पष्टै हुन्छ । सर्तहरुको सवालमा उक्त परियोजना सिधै भारतमा दर्ता भएको कम्पनीको मालिकत्वमा रहन्छ भन्ने भ्रम भएको पाइन्छ ।
वस्तुतः भारतको जीएमआरले वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ल्याएको रकम नेपालकै कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने हो, जसमा २७ प्रतिशत सेयर चुक्तापुँजी बढ्दै गएअनुसार नेपाल सरकारको हुनेछ । अर्थात उक्त परियोजनाको स्वामित्व धारण गर्ने कम्पनी नेपाली नै हुनेछ । कुनै पनि कम्पनीले कर्जा लिँदा उक्त कम्पनीका ठूला शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत वा समूहगत वा संस्थागत जमानत हुनैपर्छ ।
अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा कम्पनीका मालिकहरुले तमसुकमा सही नगरी कुनै पनि कर्जा प्रदायक संस्थाले कर्जा दिँदैन । तर, नेपाल सरकारको नै २७ प्रतिशत सेयर रहँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको जमानतमा सही गर्नुपर्ने छैन । यो ठूलो र महत्वपूर्ण सर्त हो । यस्ता सर्तलाई पनि राष्ट्रको पक्षमा नदेख्नु चरम दृष्टिदोष हो ।
नेपाल र भारतवीच सन् २०१४ मा निकै फितलो उर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए भएको छ । जसको शर्त ८ मा तीन महिनाको अग्रिम सूचनाद्वारा एकपक्षीयरुपमा उक्त सम्झौता कुनै पनि पार्टीले खारेज गर्न सक्ने छ भनी लेखिएको छ । नेपाल भारतको यस्तो उतार-चढावयुक्त सम्वन्धवीच यस्तो फितलो सम्झौतालाई नै आधार बनाएर भारतमै उर्जा बेच्छु भनी कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीले लगानी गर्न अग्रसर हुनु कम जोखिमको विषय होइन ।
पंक्तिकार चुनौति दिन चाहन्छ, उपल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा राष्ट्रघात देख्नेहरुले खाल्सा बसेका तामाकोसी ३, नलसिङगाड या त्यस्तै अरु कुनै परियोजनामा त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी पीडीए गरेर देखाउन्
भोलि भारतको कुनै प्रसारण कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरी परियोजना पूरा भएपश्चात पीटीएलाई नेपाल वा भारतले एक पक्षीयरुपमा खारेज गर्‍यो भने त्यसबखत त्यो कम्पनीको हालत के होला ? बिप्पाअन्र्तगत क्षतिपूर्ति पाउँ भनी द्वार द्वार भड्कनुपर्‍यो वा टाट पल्टनु पर्‍यो । पीटीएको त्यही फितलो शर्तका कारण धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरु उर्जा क्षेत्रमा लगानी नगरी फिरेको अनुभव छ लेखक स्वयंको ।
नेपालमा अहिले बनिरहेका आयोजनाको स्थिति हेर्दा प्रसारण लाइनको समस्या सुल्dmाउन साथ विद्युत प्राधिकरणले भारतको बजारमा बिजुली नबेची धरै छैन । यो कुरा चिनियाँहरु जस्ता तेज बनियालाई थाहा नहुने कुरै भएन । पीटीएको त्यही फितलो शर्त र नेपाल-भारत सम्वन्धको इतिहासलाई विश्लेषण गरेर नै पश्चिम सेती परियोजनामा चिनियाँहरु उदासीन भएका हुन सक्छन् ।
यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि नेपाललाई उच्च लाभ दिने गरी पीडीए गरेर आँटका साथ काम सुरु गरिसकेको कम्पनी विरुद्ध आम घृणा उत्पन्न गराउन खोज्नु निश्चय पनि सकारात्मक कुरा होइन नेपालको विकासका लागि । यी सबै विश्लेषणका आधारमा भन्नैपर्ने हुन्छ, अहिले उपल्लो कर्णालीविरुद्ध भइरहेको क्रियाकलाप राष्ट्रवादका नाममा भएको पपुलिष्ट राष्ट्रघात हो ।
यस्तै पपुलिष्ट राष्ट्रघाती लहडमा अधिक बहकिने सामाजिक मनोविज्ञान र समाजलाई बहक्याएर गरिबीको खेती गरी आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने गरिबका कथित मसिहा राजनीतिक दलहरुका कारणले नै नेपाल यो दुर्गतिमा पुगेको हो ।
पंक्तिकार चुनौति दिन चाहन्छ, उपल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा राष्ट्रघात देख्नेहरुले खाल्सा बसेका तामाकोसी ३, नलसिङगाड या त्यस्तै अरु कुनै परियोजनामा त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी पीडीए गरेर देखाउन् । अन्यथा राष्ट्रलाई यस्तो लाभ दिने खालका परियोजना माथि जाइलाग्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोह र विकास द्रोहको अभियोगमा अविलम्ब कारवाही होस् भन्ने मान्यता लेखकको रही आएको छ ।
(सुवेदी जलस्रोत विज्ञ हुन् । माथिल्लो कर्णालीबारे यो उनको व्यक्तिगत विचार हो । अर्को अंकमा ९०० वनाम ४१८० मेगावाटको विकल्प र विवादबारे चर्चा गरिनेछ )
२०७३ असार १२ गते १०:५३ मा प्रकाशित (२०७३ असार १४ गते २१:२५मा अद्यावधिक गरिएको)
Posted by arun subedi at 8:14 AM No comments:
बहसः माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउन सकिन्छ भने जीएमआर...
बहसः माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु ‘पपुलिष्ट राष्...
माथिल्लो कर्णालीः पश्चिमाले भाँड्दैछन् कि भारतले आ...
राष्ट्रवादको अपव्याख्याः भीमसेन थापादेखि केपी ओलीस...
प्रचण्डको आशन्न भारत भ्रमण र राजनीतिक पर्यटन